Global Voices teny Malagasy » Maoritania: Fanonganam-panjakana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Septambra 2018 12:37 GMT 1	 · Mpanoratra Andy Carvin Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Maoritania, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Miresaka ny fanonganam-panjakana izay nitranga tao Maoritania ny blaogera maoritaniana Rauf . Inty ny fandikàna nataon'ny solosaina ny zavatra nalefa teo amin'ny blaoginy:
Tamin'ny alarobia maraina, nandrenesana tifitra avy taminà fitaovam-piadiana mavesatra tao Nouakchott taorian'ny nandraisan'ny mpiambina ny filoham-pirenena ny fifehezana ireo toerana stratejika marobe tao an-drenivohitra Maoritaniàna, izay nitrangan'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika, tamin'ny tsy naha-teo ny Filoham-pirenena, Maaouyia Ould Taya.
Tokony ho tamin'ny 5 ora, ora tao an-toerana (sy GMT), azon'ireo miaramila mpiambina ny filoham-pirenena ny fifehezana ireo tranoben'ny fitantanan-draharaha, ny onjampeo sy ny fahitalavi-pirenena, ary nobahanany ny fidirana tao amin'ny lapa sy ireo minisitera, araka ity loharanom-baovao ity:
Araka ny voalazan'ireo mpanaramaso, napetrak'izy ireo teny amin'ireo toerana stratejika tao an-drenivohitra avokoa ireo fiara mirongo fiadiana mavesatra sy ireo tafondro fiarovana ny habakabaka. Nanakoako ny tifitra in-dimy tamin'ireo fitaovana mavesatra tamin'ny 10: 15 alina teo ho eo, tsy lavitra ny afovoan-tananan'i Nouakchott, izay naha-foana tsikelikely an'ireo arabe, tsy hisy olona.
Tao an-drenivohitra, foana avokoa ireo tranobem-panjakana ary zara raha nisy fivezivezena tamin'ny faran'ny maraina, ireo mpandeha an-tongotra sy fiara vitsivitsy monja no teny an-dalambe.
Hanandrana hikaroka blaogera maoritaniana maro kokoa aho – manantena fa hanao tahaka izany koa ireo hafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/12/125963/